Daawo:- Axmed Madoobe oo hanjabaad aan horay loo arag udiray DFS “Dalkii aan doono wan uduuli karaa”. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaDaawo:- Axmed Madoobe oo hanjabaad aan horay loo arag udiray DFS “Dalkii aan doono wan uduuli karaa”.
Daawo:- Axmed Madoobe oo hanjabaad aan horay loo arag udiray DFS “Dalkii aan doono wan uduuli karaa”.
September 12, 2019 marqaan Faalloyinka, Maqal Iyo Muuqaal, Soomaliya, Wararka maanta 0
Madaxwaynaha Jubbaland Axmed maxamed Islam oo maanta saxaafadda lahadlay ayaa ku goodiyay erayo adag oo kadhan ah DFS.
Axmed Madoobe ayaa sheegay inuu waxbadan sameeyay dulqaad balse hadda uu ka dhamaaday dulqaadkii lana gaaray xilligii uu bixin lahaa jawaab ka dhan ah Dowladda.
Xayiraada duulimaadyada ee saaran kismaayo ayuu sheegay in isaga lagu cunaqabataynayo balse waxa uu Tilmaamay in meeshii uu doono uu usafri karo , Halkaan ka daawo hadalkaas Madoobe
Axmed Madoobe Oo Si Adag Uga Hadlay Xariggii Wasiir Janan Iyo Xayiraadda Diyaaradaha Ee Kismayo .